Foundations – Lins Myanmar
Lin’s Medical Foundation Course is coming now for Myanmar’s Student!
Lin’s Medical Foundation ဆိုတာဘာလဲ? 👀
👉Lin’s Medical Foundation Course ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းသား/သူ များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Poland နှင့် China နိုင်ငံများရှိ အစိုးရဆေးတက္ကသိုလ် များအပြင် Philippines, Italy, Malaysia နှင် Spain နိုင်ငံများရှိ ကျောင်းများရှိ MBBS နှင့် MD ဘွဲ့ များ အပြင်​ အခြားနိုင်ငံတကာ ​ဆေးတက္ကသိုလ်​​များကို သွား​ရောက်​ သင်​ကြားလိုသောကျောင်းသား/သူများအတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကို လွယ်ကူစွာဖြေဆိုနိုင်ရန်​အတွက် အထူးရေးဆွဲထားပြီး သင်ကြားပေးလျှက်ရှိ သော Course တစ်ခုဖြစ်ပါသည် 😊
👉သင်တန်းကာလဟာဆိုရင် (၆လ) တတ်ရောက်သင်ကြားရမှာဖြစ်ပြီး|သင်တန်းတက်​​ရောက်နေသောကာလအတွင်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအားလွယ်ကူစွာဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် ရေးဖြေ(Writing Test )နှင့် နုတ်ဖြေ(Oral Test) များကိုပိုင်နိုင်ရန်သင်ကြားပေးမည်အပြင် Government Medical University များမှ မေးခွန်းဟောင်းများကိုလဲ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး မိမိကလေး အတွက် Interview Skills, Critical Thinking Skills များက်ိုပါသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် International Medical Degree ကိုသွားရောက်ရယူလိုသော ကျောင်းသားများအတွက် အလွန်အထောက်အပံ့ဖြစ်သော Program တစ်ခုဖြစ်ပါသည် ☺☺
☝ Scholarship အစီအစဉ်များလဲ ရှိ​သောကြောင့်အသေးစိတ်ကို Lin’s International Education Medical Group Office သို့လာရောက်စုံစမ်းနိုင်သလို အောက်ပါဖုန်းများသို့ဆက်သွယ်ပြီး ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ​​များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ 😊
Next PostSix year system of medicine